China igwe anaghị agba nchara Waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Galvanized Steel Waya eriri
Plastic ntekwasa Steel Waya eriri
Igwe anaghị agba nchara Waya eriri
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe: ya na ọtụtụ ma ọ bụ ọtụtụ eriri nke waya dị mma agbagọrịrị n'ime eriri na-agbanwe agbanwe, a na-eme ka eriri waya dị ọtụtụ waya waya na-atụgharị n'ime eriri, wee bụrụ isi dị ka etiti, site na ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke eriri agbagọ n'ime eriri gburugburu.
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe jiri akwa AISI304, AISI316 dị ka igwe anaghị agba nchara. Ọ nwere nguzogide corrosion magburu onwe ya, nguzogide okpomọkụ dị elu na nkwụsị ọkụ dị ala. A na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ petrochemical, ụgbọelu, ụgbọ ala, ịkụ azụ, ịchọ ụlọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mgbe electrolytic polishing, na igwe anaghị agba nchara waya eriri na-egbuke egbuke na corrosion eguzogide mma na-ukwuu enwekwukwa.
Igwe anaghị agba nchara waya eriri ịmụta n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka mmepụta edoghi. Usoro mmepụta nwere eserese waya, eriri na mmechi. Waya ịbịaru bụ ise a oké ígwè waya mkpanaka n'ime mkpa waya. Nddọ eriri bụ iji mepụta waya n'ime eriri, yana imechi bụ ịkpụgharị eriri n'ime eriri. Mgbe emechara usoro atọ ndị a, ha na-enyocha nyocha dị mma, nkwakọ ngwaahịa, ma mechaa ghọọ ngwaahịa rụchara.
Igwe anaghị agba nchara eriri igwe jiri akwa AISI304, AISI316 igwe anaghị agba nchara dị ka akụrụngwa. ngwongwo waya nke a kpo oku nke ejiri igwe na-aru ya na ihe ndi ozo na geometric nha nke choro. eriri waya nchara bụ eriri nke gbagọrọ agbagọ n'ime eriri sitere n'ọtụtụ waya nke waya nchara, mgbe ahụ, a na-atụgharị ụfọdụ ọnụọgụ n'ime gburugburu na isi dị ka etiti. Na akụrụngwa njikwa ígwè, ọ na-eji maka na-eweli, traction, tensioning na ebu. Ngwunye waya nchara nwere ike dị elu, ịdị arọ dị mfe, ọrụ kwụsiri ike, ọ dịghị mfe ịgbaji na mberede, na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Igwe anaghị agba nchara waya eriri elu dị ezigbo mma, na-egbu maramara nke ukwuu, enweghị ọkụ, Ezi nro, okpomọkụ na nguzogide oyi, acid na-eguzogide ọgwụ, Ezigbo nguzogide corrosion (Ọ na-eguzogide olulu na corrosion site na ọtụtụ kemịkalụ, ọ na-eguzogide ọgwụ na-egbochi nnu mmiri nnu, Kwesịrị ekwesị maka Marine / Gburugburu Saltwater), ike gwụrụ ike, na enweghị nchepụta ogologo / ogologo, olulu na akara wdg.
N'ihi eriri igwe anaghị agba nchara 316 nwere nguzogide nsị siri ike karị, nke a na-ejikarị eme ihe, Otú ọ dị, ọnụahịa eriri igwe anaghị agba nchara 304 dịtụ ọnụ ala, Mgbe ị na-ahọrọ eriri igwe anaghị agba nchara, 304 ghọrọ nhọrọ mbụ, eriri igwe anaghị agba nchara nwere ike ịme ka ọ dị ọcha na ikpo ọkụ na-eme ka elu nke eriri waya na-enwu gbaa ma dị ọcha, na-abawanye ike na nkwụsị nke arụmọrụ waya.
Igwe anaghị agba nchara eriri mara mma elu mma, elu-ọkwa nchapụta, ike corrosion eguzogide, elu ọdụdọ ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ na-eguzogide. elu okpomọkụ na-eguzogide, elu na-agbasa ike, ogologo ọrụ ndụ, inogide, na ọtụtụ ndị ọzọ e ji mara nke ụlọ ọrụ, ike ga-eji na-ebunye ogologo ụzọ ibu, eweli, traction, obimgbalielu na amị. Light light, Ọ nwere elu ike ọdụdọ, ike ọgwụgwụ ike na mmetụta ike, ojiji bụ nchebe na a pụrụ ịdabere, mfe na-ebu na iga. Enwere ike iji ya mee ihe maka ịkwado, ịkwalite, dọpu aka, ibu na guying. Ejiri na mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ mbuli elu, akụrụngwa na-ebuli elu, ihe eji egwupụta, ụgbọ ala, ịkụ azụ mmiri, akwa mmiri, ụgbọ ala, ụgbọ elu, ụgbọ okporo ígwè, ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
(Kg / 100m)
GB / T9944-2002
GB / T8918-3006
Min.Bread Ibu Ibu
1570 / MM²
1770 / MM²
1960 / MM²
Nke gara aga: Cokwanyere ntekwasa ígwè waya eriri
Osote: Igwe anaghị agba nchara Waya eriri 2
304 Igwe anaghị agba nchara Waya eriri
Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri
Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ntekwasa
Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa
Pu ntekwasa ígwè waya eriri
Hot itinye kpaliri ígwè waya eriri
Cokwanyere ntekwasa ígwè waya eriri
Plastic ntekwasa ígwè waya eriri
Electro kpaliri eriri waya waya
Steel isi waya waya
E-mail ： bangyi@bzbangyi.com
Adreesị ： Obodo Xujiadaokou Shuiwan Town, Wudi County, Binzhou City, Shandong Province
Kedu ihe ị chọrọ ịma?
Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Electro kpaliri Steel Waya eriri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri,